Frozen Keyboard Pro Developer – Ko Thiha Aye Kyaw ~ တော်ဝင်မင်းသားလေး(နည်းပညာ)
Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက် ၂၀၁၃ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ Android မြန်မာစာကီးဘုတ် “Frozen Keybord Pro” version အသစ် 0.3.0 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Frozen Keyboard ကတော့ Android ဖုန်းအသုံးပြုသူတိုင်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ယခု Pro version မှာတော့ ဒီဇိုင်းကလည်းအရင် Frozen keyboard ထက်ပိုပြီး သပ်ရပ်လှပတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Frozen Keyboard Pro ရဲ့အသွင်အပြင်ကို Android 4.0 အထက်ဖုန်းတွေရဲ့ Default Keyboard ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ယခု Frozen Keyboard Pro မှာတစ်ချို့သော မြန်မာစာလုံးပေါင်းများကို shift key ရိုက်၍အချိန်မကုန်ရအောင် key တစ်ခုချင်းစီကို long press နှိပ်ထားရုံနဲ့ Shift နဲ့တွဲရိုက်ရမယ့် အက္ခရာများကို Pop-up key အနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Frozen Keyboard Pro ကိုရေးသားသူကတော့ Android Developer ကိုသီဟအေးကျော် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Android users များအတွက် Developer ကိုသီဟအေးကျော်ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုများက ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ Frozen Keyboard Pro ဟာ မြန်မာစာရိုက်ဖို့သာဖြစ်ပြီး မြန်မာလိုဖတ်ရှုဖို့ကတော့ မိမိတို့ရဲ့ Android ဖုန်း/Tablet များမှာ ဇော်ဂျီမြန်မာစာ font သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်။ Frozen Keyboard Pro v0.3.0 for Android ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
ထုံးကြီးနည်းပညာများ February 8, 2016 at 6:54 AM
ကရင်​ကီးဘုတ်​ font ​လေးလိုချင်​ပါတယ်​
ဖိတ်စာ လိပ်စာ ပိုစ်ကတ် နဲ့ ပြက္ခဒိန် ဒီဇိုင်းကတ် လှ...
လေးလံနေတဲ့ Android ဖုန်းတွေကို အထိရောက် ဆုံးနှင့်အ...
အသုံးအ၀င်ဆုံးဖြစ်စေမယ့် Command 107 ခု
Photo Slide show Maker Platinum 5.56 Full Version ...
Use Talkatone to make free calls (Gtalk Voice and ...
Team Viewer (for andriod)
Video Watermark Pro with serial key (video မှ မိမိ...
စက်နှေးနေတဲ့ သူတွေအတွက် PC Cleaner Pro 2013 v11.13...
Jd ဆိုတဲ့ Music Vst Collection ပါ။
Dj ကလိချင်တဲ့ Member တို့အတွက် Virtual Dj ထက်လန်းတ...
Facebook သမားများ သတိထားစရာ- ၂
Window7မှာ appleကထုတ်တဲ. Mac os တင်သုံးချင်သူတွေ...
Advanced System Protector 2.1 Full Version (4MB ...
Window7ပေါ်မှာ iOs ပုံစံတင်သုံးချင်သူများအတွက် IO...
Wireless key view သုံးပြီး သူငယ်ချင်းတွေ ဆီက Wifi ...
Copy of shortcut to (1 to 4) နဲ့ RECYCLER ဆိုတဲ့Vi...
3D ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့် ချင်သူများအတွက်
Huawei နောက်ဆုံးထွက် official Firmware များ
All Windows administrator password remover
မိမိကွန်ပြူတာကို သူများတွေ မသုံးစေချင်ဘူးဆိုရင်တော...
Facebook မှာ Status အတု ဘယ်လိုရေးမလဲ ???
Counter-Strike ၀ါသနာအိုးများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ေ...
Virus ပြုလုပ်လိုသူများအတွက်..JPS Virus Maker
DVD Movies တွေကို စုစည်းပေးနိုင်တဲ့ EMDB v1.75 Por...
USB စတစ်ခ် တစ်ချောင်း အတွင်းရှိ အစိတ် အပိုင်းများ
ကွန်ပျူတာကနေ ရုပ်သံလိုင်းတွေ ကြည့်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်...
3G Wifi BT Timing Close
ဖေ့ဘွတ် မှာ gif ဖောမတ် နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံ တင်...
Tera Copy လေးပါ
HWH ဥုံ လွတ်လပ်ရေးနေ့ တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဗာရ...
password ခိုးချင်သူများအတွက် Award Keylogger Pro 3...
Huawei U8825D ကို S3 Rom တင်ရအောင်
USB Virus Scan 2.42 Build 0328 Full
ICS Root Unlocker-Android အတော်များများကို Root မယ...
Phone Internet အသုံးပြုနည်းများ။
Android ဖုန်းများတွင် 3G Internet Setting ထည့်နည်...